Ny gymnastique amin'ny rano dia fomba mahomby hanasitranana ny fanaintainana . Ny olona rehetra, na firy taona, dia afaka mampiofana ao anaty dobo.
Ny tombony amin'ny milomano eny aoriana
Amin'ny fampiharana any amin'ny dobo any aoriana, dia misy ny fanamiorana sy ny vintana tsara indrindra eo amin'ny rafitry ny locomotor, ary ny hery dia tsy mahatsapa ny hery. Anisan'izany ny asan'ny hentsika, izay mifandray amin'ny fizotran'ny taolam-paty. Ao amin'ny olona maro, tsy dia mahomby izy ireo, ka mitarika ho amin'ny aretina isan-karazany.
Fanatanjahantena hilomano any aoriana
Ny tongotra eo amin'ny soratry ny soroka, ny sandry, manongotra miaraka amin'ny borosy. Avereno ny lohanao, manaparitaka ny tananao amin'ny lafiny iray. Miverina tsikelikely any amin'ny toerana voalohany. (Ataovy farafahakeliny in-10).
Hetezo ny tananao avy any aoriana ary ento miverina izy ireo. (Ataovy in-15).
Amin'ny rano mangatsiatsiaka, mitehafoka amin'ny tananao ny tananao. Ny balim-bolamena dia manindrona tongotra, mampiadana tsikelikely ny tongotrao eo ambany rano. Tsy misy fihetsehana tampoka! (Averimberina in-12).
Mandeha eny amin'ny faran'ny dobo, manao fihetsiketsehana amin'ny tanana. Ny rano dia tokony ho eo amin'ny vala.
Ilaina ny famerenana amin'ny lefom-pandriana fotsiny eo amin'ny rano miaraka amin'ny kintana. Asandrato ny tanana, tazony ny lohanao eo an-tananao. Jereo ary diniho tsara.
Manamafy ny hozatry ny lasa ao anaty dobo
Manam-pahefana ny asam-barotra manomboka amin'ny faran'ny vanim-potoana goavam-be. Tsara kokoa ny fanatsarana ny fampiharana ataon'ny mpampianatra mahay.
Mba hanamafisana ny hozatry ny lamosina ao anaty dobo, dia azonao atao fotsiny ny mametraka ny ondany marevaka, ary manao fihetsika mahery amin'ny tananao sy ny tongotrao. Mitazona hatrany amin'ny sisin'ny dobo, mihodina amin'ny sisiny, mandohalika. Raha vao mahatsiaro ho marary fotsiny ianao dia atsaharo ny fanatontosana. Minoa ahy, ho hitanao haingana ny vokatry ny gymnastics. Noho izany, miangavy mpitsabo iray ary mankany amin'ny dobo!
Inona no lanjany mandritra ny fihazakazahana?
Cardio ao an-trano
Voatofa teo amin'ny lakandrano
Andro mahafinaritra amin'ny voatabia
Inona ny anaran'i Matvey
Siamese sy Thai cat - fahasamihafana
Nahoana no kanelina mahasoa ny vatana?
Trends ny fararano-ririnina 2016-2017 - akanjo
Ny ady ara-pihetseham-po - Marilyn Carro - faminaniana sy toro-hevitra avy amin'ny masoivoho Estoniana
Diagnosis of pregnancy ectopic
Afaka misotro ve aho aorian'ny fampiharana?
Pumpkin cake - 8 fomba tsara indrindra ho an'ny entam-barotra vita amin'ny trano fidiovana
Tafio amin'ny MDF ho an'ny famaranana ny rindrina
Ahoana no fomba hametrahako tselatra raha toa ka tapaka izy?